Maamulka C/raxmaan Faroole oo ka walaacsan Waraaqo digniin ah oo dhawaan loo daadiyay saxaafadda magaalada Boosaaso. | Halganka Online
Maamulka C/raxmaan Faroole oo ka walaacsan Waraaqo digniin ah oo dhawaan loo daadiyay saxaafadda magaalada Boosaaso.
Khal Khal dhanka amaanka ah ayaa ka jira magaalooyinka uu gacanta ku hayo maamulka gobalka Bari ee dalka Somalia kadib markii ay halkaasi ka dilaaceen xoogag bartilmaameedsada madaxda maamulka Bari.
Warqado digniin ah oo habeen ka hor lagu daadiyay magaalada Boosaaso ayaa loogu digay Idaacadaha ka shaqeeya gobalka Bari in ay la shaqeeyaan maamulka Bari ee isku magaacabay Puntland hadii kale ay lakulmi doonaan dhibaato.
Inkastoo aan la ogayn cidda daadisay warqadaha digniinta ah hadane waxaa aad uga xumaaday maamulka Bari ee uu hogaamiyo C/raxmaan Faroole.
Wasiirka Warfaafinta uqaabilsan maamulla Faroole C/xakiin ayaa sheegay in ay ka xunyihiin hanjabaadaha loo jeediyay saxaafadda sida gaarka ah ula shaqaysa maamulkiisa islamarkaana ay baarayaan arrinkaasi.
Idaacadaha iyo Bogaga Internet-ka ka jira Gobalka Bari ayaa si ka bad badis ah u taageeri jiray maamulka Faroole iyo DKMG ah balse hadda waxay wajahayaan goodis uga yimid dhinacyada kasoo horjeeda maamulka C/raxmaan Faroolle oo ugu baaqay in ay dhax dhaxaad ka noqdaan dhacdooyinka Somalia hadii kale talaab laga qaadi doono.
waxaa aad u yaraaday dhaq dhaqaaqyada mas’uuliyiinta maamulka Bari oo sanad ka hor si xor ah isaga dhax mushaaxi jiray magaalooyinka Boosaaso,Garowe iyo G/kacyo balse qaraxyo iyo dilal joogta ka noqday magaalooyinkaas ayay ku xaroodeen xarumaha ay deganyihiin.
Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay dilalkii lagula kacay saraakiil ciidan iyo Xildhibaano katirsanaa Maamulka C/raxmaan Faroolle taas oo keentay in lagu jiha wareero qaabka ay u dagaal galaan kooxahaasi hubaysan ee maamulka ku noqday “laf dhuun gashay”.
« Ciidamo Tikree ah iyo Shirkado Shidaal Baaris ah oo qabsaday qaybo katirsan degmada Galdogob gobalka Mudug. Roobab ay dadku ku diirsadeen oo da’ay qeybo ka tirsan gobolada baay iyo bakool. »